Ankazondady – Ambalavao : fiara 4×4 nifandona tamin’ny kamiaobe, Espainola iray maty | NewsMada
Ankazondady – Ambalavao : fiara 4×4 nifandona tamin’ny kamiaobe, Espainola iray maty
Par Taratra sur 30/10/2017
Maty tsy tra-drano vokatry ny lozam-piarakodia nitranga tao Ankazondady fokontany Andalamahitsy Ambalavao afakomaly maraina ny renim-pianakaviana iray teratany espainola, 62 taona. Olana ara-teknika teo amin’ilay kamiaobe no voalaza fa nahatonga ny loza…
Ny asabotsy tamin’ny 5 ora sy 30 mn hariva no nitrangan’ny loza teo amin’ny PK 468 + 200, RN 7. Fiara 4×4 marika Ford iray avy any Fianarantsoa ity nifandona tamin’ny kamiaobe iray avy any Toliara izay voalaza fa nanana olana tao amin’ny motera ka tsy voafehin’ny mpamily intsony. Renim-pianaviana iray teratany espainola, 62 taona maty tsy tra-drano vokatry ny fifandonana. Naratra kosa ny mpamily sy ireo olona niaraka tamin’ilay teratany espainola niharam-boina. Samy nahitana fahasimbana avokoa ireto fiara roa nifandona ireto.
Tonga teny an-toerana nanao fanadihadiana ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Ambalavao. Nentina haingana eny amin’ny hopitaly kosa ireo naratra.
Maty nodonin’ny moto Cross iray teny amin’ny fokontany Imerinafoavoany Talatamaty, ny 27 oktobra 2017 lasa teo koa ny raim-pianakaviana iray 47 taona. Tovolahy vao 17 taona avy any Ivato hiakatra aty an-drenivohitra ity nandona olona ity. Nisongona fiara avy ao an-kavanan-dalana izy ka nifatratra tany amin’ilay raim-piakaviana, araka ny fanazavan’ny zandary nanao fanadihadiana. Naratra mafy ilay voadona ary tsy nahatsiaro tena. Nentina haingana teny amin’ny HJRA, saingy namoy ny ainy, ny asabotsy antoandro teo ilay niharam-boina noho ny ratra mafy nahazo azy. Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny zandary ao amin’ny borigady Talatamaty.
Une réponse à "Ankazondady – Ambalavao : fiara 4×4 nifandona tamin’ny kamiaobe, Espainola iray maty"
ravonison hugues 30/10/2017 à 13:32
mba hialana amin’ny tsy fahaizana code de la route toy zany dia tsy mety ve raha takiana permis daholo ny mpitondra fitaovam-pitanterana misy motera rehetra hisorohana ny loza